(၃) နှစ် သမီးလေးရဲ့ ရုတ်တရက် ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် မိန်းမဖြစ်သူကိုသံသယဝင်နေတဲ့ အာဘွိုင်း – Nyi Ma Lay
(၃) နှစ် သမီးလေးရဲ့ ရုတ်တရက် ပြောလိုက်တဲ့ စကားကြောင့် မိန်းမဖြစ်သူကိုသံသယဝင်နေတဲ့ အာဘွိုင်း
ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းတဲ့ မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ကတော့ အာဘွိုင်းတို့ မိသားစုလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ကတော့ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ အတူပျော်ရွှင်စရာ မိသားစု ဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှု ကွန်ရက်မှာလည်း ပရိသတ် အားပေးမှု များစွာရရှိ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံရိပ်လေး တွေကို လည်း လူမှု ကွန်ရက် ကနေ တင်ပေးလေ့ ရှိတာပါ။ ကလေးလေး တွေကလည်း ချစ်စရာ ကောင်းတာ ကြောင့် ပရိသတ် တွေကလည်း ချစ်နေရတာပါ။ နှစ်ယောက်လုံး ကလည်း လူမှု ကွန်ရက်မှာ တင် သာမက အနုပညာ လောကမှာပါ အောင်မြင်သူတွေ ဖြစ်ကြ တာပါ။
ခုမှာလည်း သမီးလေးရဲ့ ပြောစကားလေးကို ကြည့်ပြီး မြတ်ရတနာကျော်ကို စနောက် လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ဖေဖေ ဖုန်းထဲမှာ အခြား မိန်းမပုံတွေ ကြည့်တာ လတ်လတ် မကြိုက်ဝူး… လတ်လတ် စိတ်ဆိုးတယ်…” ၃ နှစ်အရွယ် ကလေးက ဒီစကား ပြောတတ်မလား!!! နောက်ကွယ်က လက်မဲကြီး ဘယ်သူ လက်ချက်လဲ ဆိုတာ ကောင်းကောင်း သိတာပေါ့ ဒေါ်မြတ်ရတနာကျော်ရယ် ရယ် ဆိုပြီး စနောက် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေကာင္းတဲ့ မိသားစု ဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ကေတာ့ အာဘြိဳင္းတို႔ မိသားစုေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ကေတာ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အတူေပ်ာ္ရႊင္စရာ မိသားစု ဘဝေလးကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈ ကြန္ရက္မွာလည္း ပရိသတ္ အားေပးမႈ မ်ားစြာရရွိ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပုံရိပ္ေလး ေတြကို လည္း လူမႈ ကြန္ရက္ ကေန တင္ေပးေလ့ ရွိတာပါ။ ကေလးေလး ေတြကလည္း ခ်စ္စရာ ေကာင္းတာ ေၾကာင့္ ပရိသတ္ ေတြကလည္း ခ်စ္ေနရတာပါ။ ႏွစ္ေယာက္လုံး ကလည္း လူမႈ ကြန္ရက္မွာ တင္ သာမက အႏုပညာ ေလာကမွာပါ ေအာင္ျမင္သူေတြ ျဖစ္ၾက တာပါ။
ခုမွာလည္း သမီးေလးရဲ့ ေျပာစကားေလးကို ၾကည့္ၿပီး ျမတ္ရတနာေက်ာ္ကို စေနာက္ လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ေဖေဖ ဖုန္းထဲမွာ အျခား မိန္းမပုံေတြ ၾကည့္တာ လတ္လတ္ မႀကိဳက္ဝူး… လတ္လတ္ စိတ္ဆိုးတယ္…” ၃ ႏွစ္အရြယ္ ကေလးက ဒီစကား ေျပာတတ္မလား!!! ေနာက္ကြယ္က လက္မဲႀကီး ဘယ္သူ လက္ခ်က္လဲ ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္း သိတာေပါ့ ေဒၚျမတ္ရတနာေက်ာ္ရယ္ ရယ္ ဆိုၿပီး စေနာက္ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
Previous post အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဘုရားသို့ လာရောက်ဖူးမျှော်ကြတဲ့ ဧည့်သည်များအား တစ်ထောင်တန်းများ ဝေပေးနေတဲ့ နေတိုးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်
Next post နှစ်သစ်သင်္ကြန်အချိန်အခါမှာ ရဟန်းဝတ်နေတဲ့ ဦးဇင်းရဲ့မှာလိုက်တဲ့ အမှာစကားတွေကြောင့် ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဖြစ်သွားတဲ့ ဌက်ပျော်ကြော်ရဲ့ဇနီး